Fikirakirana solosaina :: Namoronana lalao ny fiarovana ny zon’ny ankizy • AoRaha
Fikirakirana solosaina Namoronana lalao ny fiarovana ny zon’ny ankizy
Tsy afa-misaraka amin’ny ankizy sy ny tanora ny fikitikitihana ny aterineto. Nahita fomba hafa hanentanana momba ny zon’ny ankizy, amin’ny alalan’ny teknôlôjia moderina ny Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny reny sy ny zaza (Unicef) ka manolotra ny lalao an-tsolosaina « Tsaiky ».
Vokatra vaovao efa afaka lalaovina ao amin’ny tambajotran-tserasera sosialy Facebook, amin’izao fotoana izao.
Tamin’ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny aterineto « Safer Internet day » no namoronana ny lalao. Mizy fizarana roa ny « Tsaiky », dia ny « Misurf » sy « Salama ». Fifanaraham-piaraha-miasa tamin’ny Unicef sy ny fikambanana ONG Youth First izy io. Tanjona ny hampianarana, hanentanana, hanofanana ary hanoroana hevitra ny mpampiasa tambajotra sosialy rehetra manoloana ny zon’ny ankizy sy ny fiarovana ireo zaza amin’ny loza mety ateraky ny aterineto.
Tsotra ny mampiasa azy. Mila mamaly fanontaniana betsaka indrindra ny mpilalao mba hahazoany naoty ambony indrindra. Miompana amin’ny fahasalaman’ny zaza ireo fanontaniana ao anatin’ny lalao « Salama ». Misy ihany koa ny torohevitra maro ho an’ny fivoaran’ny zaza sy ny ankizy. Ny «Misurf» kosa no mampahafantatra sy manoro ary miaro amin’ireo loza mety ateraky ny aterineto.
Fandaminana tsena :: Manohy ny asany eny amoron- dalana indray ireo mpivarotra